UKUTYA OKUNCEDA EKUGXILISENI NGELIXA UFUNDA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Ukutya okuNceda ekugxininiseni ngelixa ufunda
Imidlalo Amabhaso amaqakamba e-New Zealand: U-Williamson uphumelele imbasa ye-Sir Richard Hadlee okwesine
Ekhaya Impilo Isondlo Isondlo oi-Denise Ngu Denise ubhaptizo | Ipapashwe: NgeCawa, nge-2 Matshi 2014, 18:11 [IST]
Kunye neemviwo ezisekoneni, abantwana esixekweni bayaphumla malunga nokuba batye ntoni ukuze bagxile ngcono. Kukho uphando oluninzi oluthi ukutya sisisombululo kuphela esinokukunceda ukuba ugxile ngcono kwaye uncede nasekugcinweni kwememori. Nangona oku kunokuvakala kuyintlanzi encinci, oku kutya xa kongezwe kwisondlo sakho kunokugcina ubuchopho bakho kwindawo ephezulu.
ukukhulula njani ubunzima emva kokukhulelwa?
Ngokukodwa ngawo wonke umsebenzi wokugqibela, ongezwe kuxinzelelo lwabazali xa kufikwa kwiimviwo, kuhlala kukho loo nto ucinga ukuba ungakulibala nantoni na oyifundileyo. Iingxaki zokugxila yinto engeyiyo intsha kwaye ihlala ijongana nawo wonke umntu. Kubomi bomntu, xa kuziwa kwiimviwo, ukukhumbula / ukugxila kunye nokugcina ulwazi nako kunokudika kancinci.
IINDLELA ezi-5 ZOKUBA NGUMFUNDI OPHILILEYO!
Oku kutya kuthotyiweyo apha ngezantsi kuya kukunceda ugxile kwaye ukhumbule, kuya kuzolisa imithambo-luvo yakho kwaye kukuncede ukuba ucinge. Uya kuqaphela ukuba emva kokutya oku kutya ngelixa ufunda kuya kuphucula impilo yakho yonke kunye nokuba sempilweni. Oku kutya kukutya kuya kuphucula ukusebenza kwengqondo yakho, kulola ukugxila kwethu, ukuphucula inkumbulo kunye nokunyusa ixesha lokujonga.
Jonga oku kutya kukutya xa ufunda:
Kukangaphi ukwenza i-spa yeenwele
Thatha isifundo uze ufunde oku!
Jonga ngononophelo i-walnut, ayifani nengqondo encinci. Oku kutya kwengqondo kutyebile kwii-antioxidants ezilwa nomonakalo omkhulu wasimahla kwiiseli zobuchopho ze-DNA ekunceda ukuba ugxile ngcono.
Itshokholethi emnyama kukutya okulungele ukutya xa usifunda. I-caffeine efumaneka kwitshokholethi yenza kwa into enye, ukongeza ekusebenziseni ubutyebi kunye nokukhusela kwengqondo ukutya okuchaseneyo ne-antioxidant.
Iiblueberries kukutya kwengqondo okudingayo xa ukufundela uviwo. Iiblueberries zikhusela ingqondo kuxinzelelo lwe-oxidative kwaye zifumene ukuphucula amandla okufunda kunye nezakhono zemoto.
Imifuno enegqabi xa ityiwe ngelixa ufunda izokunceda kakhulu. Isipinatshi siqukethe ivithamin E ephucula ukusebenza kwengqondo kwaye yonyusa nengqondo.
Iikherothi azilungelanga kuphela umbono kodwa zilungile nakwingqondo. Ukutya isidlo esicocekileyo seminqathe eorenji esitsha kuya kunceda ukunciphisa ukudumba kunye nokubuyisela imemori. Ikhompawundi ekhoyo kwikherothi eyaziwa ngokuba yi-luteolin iya kunceda ukunciphisa ukulahleka kwememori kunye nokunyusa impilo yengqondo iphela.
Iintlanzi zityebile kwi-omega 3 fatty acids eya kuthi inike ingqondo yethu ukomelela okukhulu ngelixa sifunda. Kuphando kubonisa ukuba ii-acid ezibalulekileyo ezikhoyo kwiintlanzi ziya kunceda ukugcina imemori yakho ibukhali.
lweoli yemostade vs ioyile yekhokhonathi yeenwele
Ungaze uphoswe sisidlo sakusasa ngexesha leemviwo. Yitya ukutya okuziinkozo kwisidlo sakusasa njengoko ikwenza ugcine ukujongwa kwengqondo imini yonke ngelixa ufunda. Ukutya okuziinkozo okupheleleyo kusebenza ngakumbi kunee-carbohydrate kwisidlo sakusasa.
Imbewu kajongilanga ityebile kwi-dopamine eyikhemikhali yobuchopho ebandakanyekayo ekwandiseni inkuthazo kunye noxinzelelo ngelixa ufunda uviwo.
Iibhontshisi yenye yezona zinto zitya kukutya ngexesha lokufunda iimviwo. Kwinkonzo enye yeembotyi kuyonyusa inkuthazo. Banokugcina inqanaba lamandla rhoqo, kuba bagcina amanqanaba eswekile yegazi ezinzile.
abantu abamagama abo aqala ngo-r
Njengembewu kajongilanga, imbewu yeflakisi nayo iluncedo kakhulu xa kufikwa kumba woxinaniso ngelixa ufundela iimviwo. Imbewu yeflakisi ine-magnesium, i-B-vithamini, i-omega-3 fatty acids, ifayibha enceda ngokucaca kwengqondo.
Iibhanana ziqulathe ivithamin B6 kunye ne potassium encedisa kwimveliso yomzimba ye-serotonin, norepinephrine kunye ne-dopamine. Ezi zinto zintathu zonke zinceda ekugxininiseni.
Ikofu eninzi ayilunganga empilweni yakho, kodwa ikomityi yekofu eshushu iya kukhulisa ukugxila kwakho, amandla kunye noxinzelelo ngelixa ufunda.
Ukuba ufuna ukwandisa uxinzelelo lwakho ngelixa ufunda, iti eluhlaza yenye yeendlela onokukhetha ukuzongeza kwisidlo sakho. Izongezo / iFlavonoids ekwiti eluhlaza ziya kunceda ukuphucula ingqalelo kunye nenkumbulo.
Imifanekiso ka-rihanna kunye no-chris brown balwa
umgca opinki okhanyayo kuvavanyo lokukhulelwa
ususa njani iinwele kumlomo ongasentla
ungayifumana njani intombazana ukuba ikuphuze
iziphumo ebezingalindelekanga zeti yobisi eluswini
Iresiphi yesonka poha ngesi-Hindi